बिहेअघिको त्यो 'गल्ती'
जुन कुरा नहोस् भनेर मैले कैयौं दिनदेखि भगवानसँग प्रार्थना गरिरहकी थिएँ, आखिर त्यही कुरा भएरै छोड्यो- मेरो पतिले सुहागरातकै दिन मेरो ‘भर्जिनिटी’को बारेमा शंका गर्दै मलाई प्रश्न गरे- “यो भन्दा पहिले तिम्रो कसैसँग …?”
सायद सबै महिलाहरू सुहागरातको दिन तनावमै हुन्छन् होला। लोग्ने मान्छेसँग पहिलो पटक एउटै कोठामा, एउटै ओछ्यानमा ढोकामा चुकुल लगाएर सुत्नु पर्दा कुन चाहिँ महिलालाई तनाव नहोला र ? तर त्यो तनावमा मेरो अर्को तनाव पनि थपिएर म निकै अधिर भएकी थिएँ।
म त्यसलाई बिर्सेर आफ्नो सुहागरात रंगीन र अविस्मरणीय बनाउन चाहन्थें तर फेरि त्यही प्रश्न दिमागमा तैरिन आइहाल्थ्यो- म ‘भर्जिन’ नभएको उनले थाहा पाए भने के गर्ने ?
त्यही बेला हामी बीचको अमुकता र कोठामा छाएको सन्नाटालाई तोड्दै उनले हिम्मत गरेर मेरो घुम्टो खोल्न लागेको जस्तो गरे र सोधे “सुत्ने हो?”
मलाई निकै थकाइ लागेको थियो, म जतिसक्यो छिटो सुत्न चाहन्थें तर कसरी उनीसँग एउटै ओछ्यानमा सुत्ने? त्यसैले सुत्न मन लागे पनि मैले सुत्न मन नलागेको बहाना बनाएर टाउको हल्लाएँ।
त्यसपछि उनले मलाई हातमा समातेर ओछ्यानतिर ताने। म नाकमा डोरी लगाएको गाईजस्तै उनको बशमा परेर ओछ्यानको बीचमा गएर बसें। उनी अलि नजिक आएर मेरो हात समाते र मेरो ढाडतिरबाट मलाई अङ्गालो हाले। मैले पनि विरोध गरिनँ। किन विरोध गर्थें र? वास्तवमा म पनि त्यही नै चाहन्थें, मलाई पनि उत्सुकता त थियो नै।
मेरो मुहार नजिकै आएर सानो आवाजमा उनले सोधे, “के छ विचार?” उनको स्वासको तातो र सुगन्धित हावाले मेरो मन झन् चञ्चल बनायो। केहीबेरको लागि मेरो मनबाट तनाव भाग्यो, म सुहागरातको रोमाञ्चक वातावरणमा भुलें।
‘के छ विचार?’ भन्ने उनको प्रश्नले मलाई लाज लागेको थियो र अलिकति मुन्टो बटारेर मैले भने “छि: पहिलो दिनमा नै?”
“अरूले थाहा पाए भने के भन्लान्? नाइँ हुन्न” मैले बहाना बनाएको जस्तो गरेर नजर झुकाएर भनें। तर उनका नशिला नजरहरू, मन्द मुस्कान,‍ र स्वासको न्यानो कामुकताले मलाई लठ्ठ बनाइसकेको थिय । म अर्कै संसारमा प्रवेश गरिसकेकी थिएँ।
“कस्ले थाहा पाउँछ र?” उनले मलाई मनाउन प्रयास गर्दै भने।
त्यसपछि हामी संसारका सारा दु:ख बिर्सेर स्वर्गको आनन्दमा अङ्गालो हालेर सुतिरहेका थियौं।
म ‘भर्जिन’ नभएको उनले थाहा पाएनन् भनेर म ढुक्कजस्तै भएँ तर त्यही बेला उनले अचानक सोधेको प्रश्नले मलाई छाङ्गाबाट खसे झैं गरायो, “यो भन्दा पहिले तिम्रो कसैसँग …?”
“किन र?” मैले झस्केर सोधें।
जे प्रश्न उनले नसोधुन् भनेर मैले पुकारा गरेकी थिएँ त्यही प्रश्न उनले सोधेका थिए। जुन कुरा उनले थाहा नपाऊन् भन्ने म चाहन्थें, सबभन्दा पहिले नै त्यो कुरा उनले थाहा पाए। म कसरी भनूँ उनलाई कि ‘हो, मैले ‘भर्जिनिटी’ गुमाइसकेकी छु’ भनेर? मलाई त्यो कुरा भन्न डर लागेको थियो।
म चाहन्थें कि मेरो त्यो नितान्त व्यक्तिगत र गोप्य कुरा उनले थाहा नपाऊन्। सुहागरातको दिन थाहा नपाएपछि त त्यो प्रश्नबाट म सधैंको लागि सुरक्षित हुनेछु भन्नेमा म थिएँ। तर सत्य कुरो लुकाएर कसरी लुक्थ्यो र? मैले नभने पनि, उनले थाहा नपाए पनि सत्य त त्यही थियो कि उनीसँग बिहे हुनुभन्दा पहिले नै मैले गल्ती गरिसकेकी थिएँ।
हामी नारीहरूलाई पुरूषहरूले किनबेचका ‘सामान’ जस्तै नै त सोच्छन्। उनले पनि मलाई नयाँ सामान भनेर किनेका थिए तर पुरानो पर्‍यो भन्ने शंकामा दु:ख मनाउ गर्दै थिए।
मेरो हुनेवाला पतिले सुहागरातको दिन मेरो बारेमा थाहा पाएर सोधिहालेछन् भने ‘साइकल चलाएर त्यस्तो भएको हो’ भनेर टार्ने भनेर मैल बिहे अगाडि नै मानसिकता बनाएकी थिएँ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार नै मैले काँपेको स्वरमा भने, ‘खै साइकल चलाउने भएकोले हो कि?” मैले ढाँट्ने प्रयास गरे।
“उसो भए खेलकुदले गर्दा हो कि?” मैले फेरि अर्को बहाना बनाएँ। म ‘हाइ जम्प’को खेलाडी पनि थिएँ। वास्तवमा मैले मेरो ‘भर्जिनिटी’ तोडेको पनि एकपटक टुर्नामेन्टमा गएको बेला होटलमा बसेको समयमा नै थियो।
अब लाजै पचाएर आफूले गरेको काम नभनी नहुने भयो भनेर सोचिरहेकी बेला मेरो मनमा पनि कुनै बिजुली परेजस्तो गरी अचानक एउटा प्रश्न आयो- म ‘भर्जिन’ हैन भन्ने उनले कसरी थाहा पाए त?